Peeji Ihe - Nchọgharị a na-eme ka arịrịọ laghachi na otu ihe nkesa na otu oge. Ọ bụrụ na enwere otutu ngalaba ma ọ bụ subdomains, enwere ike ịrịọ ihe n'otu oge. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye ọtụtụ subdomains maka ederede, mpempe akwụkwọ, na mgbasa ozi iji nweta ụzọ nchọgharị si arịọ arịrịọ ndị a. Ọ bụrụ na ị na-ebugharị ọtụtụ ederede ma ọ bụ ihe ederede, ijikọta ha n'ime obere faịlụ ga-emeziwanye arụmọrụ.
Nzipu Nwepụta ọdịnaya - Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọdịdị ala na-ekere òkè na oge ọ na-ewe iji were saịtị gị. Ọ bụrụ na ị nọ nso na sava gị, ọ na-adị ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ị gafee kọntinent, ọ ga-adị nwayọ. A CDN nwere ike ibudata ihe oyiyi gị na mpaghara ma jeere ha ozi ngwa ngwa nye ndị na-ege gị ntị.
Ntinye ekwentị - Ntughari mmeghachi omume bụ, n'ụzọ ziri ezi, ọnụma niile ugbu a iji nye ahụmịhe onye ọrụ na-agbanwe agbanwe n'agbanyeghị nlele ngwaọrụ gị. Mana o nwekwara ike ibelata nlele mkpanaka gị - ebe ọnụọgụ ndị ọbịa na-arịwanye elu.